ब्राजिलका राष्ट्रपतिले कोरोनाको भन्दै औषधि खाएको भिडियो भाइरल – Sandesh Munch
July 9, 2020 139
२५ असार, काठमाडौं । बिभिन्न विवादमा पर्दै आएका ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले कोरोनालाई निको पार्ने भन्दै एक औषधि खाएको भिडियो भाइरल भएको छ ।
कोरोनालाई सामान्य फ्लु भन्दै बेवास्ता गर्दै आएका बोल्सोनारो आफैं कोरोना संक्रमित भएका छन् । आफू कोरोना पोजेटिभ भएको जानकारी दिन आयोजित प्रेस ब्रिफिङको क्रममा मास्क निकालेर बोलेको भिडियो पनि भाइरल भएको थियो ।
अहिले उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा एक भिडियो पोष्ट गरेका छन्, जसमा उनले कोरोना निको पार्ने औषधि भन्दै सेतो रङ्गको गोली पानीले निलेको देखिन्छ । ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारोले भिडियोमा भनेका छन्, ‘म हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन औषधिबाट आफ्नो उपचार गर्दैछु ।’
जबकी कोरोनाको औषधि पत्ता लागेको छैन र कुनै पनि औषधि कोरोना संक्रमित विरामीको उपचारमा प्रयोग गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति दिएको छैन ।
हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन मलेरियाका बिरामीलाई दिइन्छ । सुरुमा यो औषधि कोरोना भाइरस संक्रमितलाई पनि उपयुक्त हुने ठानिएको थियो तर पछि त्यसको पुष्टि भएन ।
तर राष्ट्रपति बोल्सोनारोले भिडियोमा विज्ञानले पुष्टि नगरे पनि आफूले यो औषधि खान थालेपछि सुधार भएको महसुस गरेको बताएका छन् । भिडियोमा कुनै डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मी देखिँदैनन् । यो भिडियो अहिले सामाजिक सन्जालहरुमा भाइरल भइरहेको छ ।
गत मार्च महिनामा बोल्सोनारोले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन कोरोनाको औषधि भनेको भिडियो ट्वीटर र फेसबुकले डिलिट गरिदिएका थिए ।
Posted in अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, कोरोना अपडेट
Prevतिब्बत विवादः चीनले दियो अमेरिकालाई यस्ताे जवाफ
Nextअनलाइन कक्षा लिने विदेशी विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुकै देश फर्काउने अमेरिकी सरकारको निर्णयविरुद्ध हार्वर्ड र एमआईटी विश्वविद्यालयले अदालतमा चुनौती दिएका छन् ।
धेरै सुत्नुका यस्ता छन् बेफाइदा
मुटु अस्पतालका डाक्टरसहित बुटवलमा थपिए ३५ संक्रमित
खुसिको खवर,समातियो भारतीय आर्मि, भारतलाई भयो तनाब ।
७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्,आफ्नो फोक्सो पढ्नुहोस् अनि शेयर गर्नुहोस्
अत्यन्तै दु:खद खबर : भर्खरै कोरोनाको कारण दक्षिण अफ्रिकामा नवजात शिशुको मृ’त्यु ! RIP !!!! (13115)
भर्खरै कतारबाट आयो निक्कै ठुलो दुखको खबर, के भयो तेस्तो ? Watch Video (12354)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12017)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9702)
अब मासिक ९९ रुपैयाँमा फोन र इन्टरनेट सहित असीमित सुविधा
तपाईको भाग्य परिवर्तन हुने र छिट्टै धनि बन्ने यी ५ संकेतहरु जान्नुहोस् !